Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 22/04/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 22/04/2019
(နေပြည်တော်၊ ၂၂-၄-၂၀၁၉ ရက်)
Naypyitaw April 19
Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing received Mr. Ichiro Maruyama, Ambassador of Japan to Myanmar in Nay Pyi Taw on 19 April.
During the meeting, they discussed and exchanged views on matters relating to Japan’s stance in the international arena on the government and the Tatmadaw resolving events in Rakhine State Buthidaung and Maungtaw region, status of forming and works conducted by Court of Inquiry on incidents related to events in Rakhine State and the Tatmadaw’s work on achieving internal peace.
Union Minister Dr. Win Myat Aye received Mr. Knut Ostby, United Nations Resident and Humanitarian Coordinator Hall in Minister’s office on 19 April.
At the meeting, status of national level strategy on closing IDP camp soon to be approved; status of drawing up and implementing regional work programs once the strategy was approved; coordination between Union level and state government to provide effective humanitarian assistance in Rakhine State; status of ASEAN countries’ current participation in the process of receiving returnees; humanitarian and development assistants and rehabilitation works for conflict displaced persons, status of cooperation between relevant civil society organizations and non-government organizations were discussed.
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro Maruyama အား ဧပြီလ ၁၉ ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြဿနာများအား အစိုးရနှင့် တပ်မတော်၏ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်မှ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် အတွက် တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ကုလသမဂ္ဂ ယာယီဌာနေကိုယ်စားလှယ်နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးသည် ကုလသမဂ္ဂ ယာယီဌာနေကိုယ်စားလှယ်နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူး Mr. Knut Ostby အား ဧပြီလ ၁၉ ရက်တွင် အဆိုပါ ဝန်ကြီးရုံး၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် နိုင်ငံအတွင်းရှိ IDP စခန်းများ ပိတ်သိမ်းနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာကို မကြာမီ အတည်ပြုနိုင်တော့မည့် အခြေအနေများ၊ အဆိုပါ မဟာဗျူဟာအား အတည်ပြုပြီးနောက် ဒေသအလိုက် လုပ်ငန်းစီမံချက်များ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ထိရောက်စွာ ပေးအပ်နိုင်ရေး ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအကူအညီများ၊ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း များနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေ များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။